UWill Smith uhlawula umhla we-4 kaJulayi kwiFireworks e-New Orleans - Inkcubeko Yopopu
UWill Smith uhlawula umhla we-4 kaJulayi kwiFireworks e-New Orleans
Intatheli yaseHollywood unayo funda UWill Smith uhlawule iidola ezingama-100,000 kwi-4 kaJulayi yomlilo owenziwe kuMlambo iMississippi eNew Orleans.
Emva kokuba amagosa esixeko enyanzelwe ukuba arhoxise iminyaka yomlilo ngenxa yobhubhane, iingxaki zezezimali zisongele umboniso wonyaka wesibini othe ngqo. Oko kukuthi, kude kube Usuku lwenkululeko Usodolophu uLaToya Cantrell uthathe u-Twitter ngolwesiHlanu encoma uSmith ngesisa sakhe.
Ijanet jackson isitya sokungasebenzi kakuhle
USmith ngoku useNew Orleans usebenza kwifilimu eqondiswe nguAntoine Fuqua Ukukhululwa , eyayiqala ukufotwa eGeorgia ngaphambi kokuba imveliso ihanjiswe eLouisiana emva kokuba urhulumente epasise imithetho emitsha yokuvota.
Okwangoku ngelixesha, iSizwe siza kuza nembali yaso kwaye sizama ukuphelisa imizila yocalucalulo lwamaziko ukufezekisa ubulungisa bokwenene bobuhlanga, utshilo uSmith noFuqua kwingxelo edibeneyo. Asinakuthi ngesazela esilungileyo sinike inkxaso kuqoqosho kurhulumente owenza imithetho yokuvota eguqukayo eyilelwe ukuthintela ukufikelela kuvoto.
ipirate emnyama yeezy yokwenyani vs inkohliso
I-MLB itsalile kule nyanga i-All-Star Game e-Atlanta. U-Ed Bastian, u-CEO we-Delta Air Lines, nekomkhulu layo e-Atlanta, kubizwe umthetho awamkelekanga kwaye uphawule ngendlela esisiseko salo mthetho oyilwayo esisekwe kubuxoki, ecaphula ubuqhetseba babavoti bengachazwanga buhluthwe nguDonald Trump. Inkampani ese-Atlanta esekwe kwiCoca Cola ikwavakalise esidlangalaleni ukungonwabi kwayo kwinkqubo yokucinezela abavoti.
Ukukhululwa Ibalisa ibali eliyinyani lekhoboka elalibalekile eligama linguPeter elabaleka kwisityalo saseLouanaana kwaye lanyamezela uhambo olothusayo oluzaliswe yimigxobhozo enobuqhophololo kunye nabazingeli abanamagazi abandayo ukuyenza yaya kwi-Union Army.
Ungazenza njani iintyatyambo kwi-buttercream frosting
kanye nge hollywood yandiswa
UChris evans kunye no-robert downey jr